Koowheel isizukulwane 2nd e-skateboard ogibele lokuqala - Jomo Technology Co., Ltd
Koowheel isizukulwane 2nd e-skateboard ogibele lokuqala
Sawubona ~ Ngenxa Koowheel 2 nd isizukulwane skateboard kagesi Kooboard iyona skateboard wokuqala kagesi empilweni yami, futhi kwakuqabukela bachithe imali ukuthenga onjalo ithoyizi ezibizayo (Ngaphezu, ngithenge ibhayisikili umzila nge "imbangela ezinhle" ...) ngakho ngangingakwazi ezimisele ukuya epaki. Futhi mina Kwakungeve kubuhlungu eseqedile isivivinyo mileage ububanzi, kamuva I ukuchaza Kungani kuba buhlungu.
Ngaphambi ufunda indaba, kuqala ngedatha le skateboard sika inkomba.
Umthwalo ingqikithi koowheel skateboard kagesi kuyinto 61.9KG nge esisindo 58.5KG + kudivayisi Ukuvikelwa umzimba 1.6KG + ultra-engasindi ukugijima izicathulo 0.2KG + 960ml Water + 1kg umakhalekhukhwini okhiye imfucumfucu 0.6KG.
Lolu hambo lokuqala
Izolo ntambama isimo sezulu ngempela ashisayo, wafuna ukuthatha skateboard kuya Riverside Park, kodwa ngoba umndeni dinner isikhathi sisondele kakhulu, kwadingeka ukuthi ahambe eduze yashayisa unqenqema ukuyizama. Uma sekuhwalala, Park has abantu kakhulu, ngakho ukushesha kanye deceleration ziyinsakavukela kakhulu, cishe 5:30 pm, ngase abizelwa umndeni wami, kulokhu wathatha imizuzu 55.
Ngemva kokudla kwakusihlwa, akazange ithemba ukuya futhi.
Futhi emva kwadingeka ukudla kwakusihlwa nomkhaya wami futhi ubuyele Riverside Park at 9 enhloko, kulokhu isinyathelo kuphela abagijimi oqabukelayo, ngakho ukudlala namafutha isikhashana, indlela Okuningi okudliwa ukujabulela, kulokhu ugibele amahora amabili nesigamu .
Ngobusuku, washelela 10.68KM.
Nine ebusuku, futhi agxumele 28.76KM.
Slope bushintsha kancane lapho engamamitha silinganiselwa 26 amamitha.
Idatha ngenhla esalotshwa APP "Geo Tracker", ukuma ngesiphuphutheki ukuze imodi eqondile. Kwindlela ibhayisikili mayelana 2.3 km, cishe zonke egandayiwe asphalt, amamitha 50 kuphela ngempela esingemnandi ngokhethe (izindawo ezimbili ingqikithi amamitha 50). Ngingathanda wayechithe mayelana 3 amahora nemizuzu 14 (cishe bonke bemi ogwini skateborda ~ _ ~ "), ngempela nakho okubuhlungu.
Kulokhu ridded 39,44 km nge ibhethri ngokugcwele icala ~ Awuzange ukubona akulungile, kwesinye ibhethri, isikhathi eziningana ngangifuna ukunikela uya ekhaya bese ukuhlola futhi ngolunye usuku, lokhu ukuphila ngempela normal ... ... ... ... (futhi uma uphelelwa ibhethri, isandla wathinta ibhethri kwenzakala abandayo, motor kuphela micro-lokushisa, Good ngempela ~), ngicabanga uma ngingazimemezelanga ayeke uhambe, mileage kufanele kube ephakeme, uma ekhona umnikazi wale ibhodi ke ungazama. Kufanele kube isikhathi eside kunami ame skateboard .
Phakathi nayo yonke ukucutshungulwa, kwadingeka izinguquko eziningi e isivinini kwabhoboka (ukusheshisa yami deceleration nesivinini ububanzi sicela ubheke isithombe esingenhla), ngakho mina ngacabanga ukuthi kufanele kube 20KM mileage ububanzi ku umkhawulo (ngokuvumelana nakho, abakhiqizi ngokuvamile ngejubane ufudu kanye nesivinini njalo ukukala aphume idatha enhle, ngakho cha kholwa). Kodwa futhi ngenxa lo mbono ngakho ngabhekana kwakuwacasula (ngineminyaka engu ucabanga ukuthi ngeke ngokuzumayo amandla off, kufanele ubambe 7.8 kg skateboard kagesi emuva ekhaya).
Futhi ngenxa yalesi umbono okungewona, ngakho mina ridded kuze 12 ezimpondweni, ugesi ngempela kudliwe ngaphandle. (Owazi idatha bayolotshwa phansi olandelanayo kangaka ...... .. Ngilahlekelwe ngempela), Kuyinto 20KM ngokushesha kunokuba Bengizitshela isivinini 20KM. (le ndaba kusitshela, ukukhumbula lokho okushiwo izibani amandla ukubonisa ngaphambi ukudlala skateboard kagesi, futhi ungacabangi ukuthi wonke umakhi kumele kube olukhohlisayo ').
emathangeni Abane kubona kwaba zihlale phansi skateboard (play njengoba Kart lapho u bakhathele, kuhle ngempela)
Ngehora lesishiyagalolunye umkhawulo ijubane mayelana 26.8KM.
Kafushane, ngemva kwalokhu kuhlola, kukhona okungahambanga elandelayo kungaqinisekiswa:
Mileage skateboard kagesi muhle kakhulu, abakhiqizi ukunikeza idatha olandelanayo kakhulu.
Motor nebhethri izinga muhle, ogibele bushelelezi cishe akukho superheat.
Leli sondo izomangaza ngezinyawo endleleni isitini.
Uma kukhona 12mm amatshe ngaphansi isondo, amasondo ngeke sifinyelele.
Uma kukhona amatshe 5mm, akuphazamisi control.
Amabhuleki ibukhali futhi ebucayi, sicela musa ibenze kanzima kakhulu, wenze focus sigudluke ngaphambili.
Ukusheshisa ukusebenza kuhle futhi, kufanele kube kumnandi ngemuva kokuvula.
It has a nezimo ezinhle endleleni anolaka, unenkululeko ebhodini nje ukwenza amasondo nganamathisela.
Mileage ngenhla futhi ukuhlola okusheshayo kuyenziwa ngaphandle kokuvula, ngizonenza ukuvula ukubona ijubane wangempela ibhodi ngokuzayo.
isikhathi Iposi: Septhemba-29-2017